Git Sangit News » सेयर बजारमा उत्साह, ५ महिनायताकै उच्च विन्दुमा कारोबार
सेयर बजारमा उत्साह, ५ महिनायताकै उच्च विन्दुमा कारोबार
कोरोनाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेकै बेला सेयर बजारले भने उकालो गति समाइरहेको छ।
सेयर बजारको परिसूचक नेप्से सोमबार २२ अंकले बढेर विगत ५ महिनायताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। यस दिनको कारोबारपछि नेप्से परिसूचक १४ सय ८४ अंकमा पुगेको छ। असार १५ गते ११ सय ७८ अंकसम्म नेप्से झरेको थियो।
नेप्सेको अंक मात्रै बढेको छैन। कारोबार रकममा पनि केही दिनयता उत्साह छ। दैनिक औसत २ अर्बको कारोबार हुँदै आएकोमा सोमबार भने कारोबारमा उछाल नै आएको छ। यस दिन ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ।
सेयर बजारमा बैंकहरुको वर्चस्व छ। तिनै बैंकहरुको नाफा भने घटेको छ। अब बैंकहरुले लगानीकर्तालाई दिने लाभांशको दर पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा घट्नेछ। अर्कोतर्फ बैंकहरुको कतिपय ऋण नउठ्ने जोखिम पनि छ।
बजार बढ्नुको मुल कारण के त?
सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल बैंकमा अधिक तरलता हुनु र त्यसको प्रभावले ब्याजदर घट्दै जानुले सेयर बजारमा मुख्य प्रभाव परेको बताउँछन्।
‘सिंगल अंककै ब्याजमा ऋण लिन पाइने अवस्था छ, बैंकहरुले सेयर कर्जाका लागि पनि अफर ल्याइरहेका छन् यसले बजार सकारात्मक दिशातिर गएको छ’ उनले भने।
त्यस्तै कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश दिने बेला भएकाले पनि बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनी बताउँछन्। अर्कोतर्फ विभिन्न औधोगिक वा व्यवसायिक क्षेत्रतर्फ लगानी जान नसकेकाले सेयर बजारमा डाइभर्ट भएको उनको बुझाई छ।
यसअघि बजारले १८ सय ८१ सम्मको रेकर्ड बनाएकाले त्यो अंक नतोडिएसम्म नेपालकाे बजार बढेको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
‘अझै धेरै कम्पनीहरु खासगरी बैंकको मूल्य अन्डरभ्यालुमै छ, त्यसकारण बजारमा यतिबेला आकर्षण देखिएको हो’, उनले भने।
निषेधाज्ञापछि सेयर बजारमा लगानीकर्ता आफैले अनलाइनबाट सेयर खरिदबिक्री गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय बजार प्रविधिमैत्री हुँदै जानुले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको उनको बुझाई छ।
विदेशमा हुनेहरुले पनि अहिले सेयर खरिद गर्न र बिक्री गर्न सक्ने हुँदा नयाँ लगानीकर्ता पनि बजारमा प्रवेश गरेको उनले बताए।
सेयर बजार बढ्नुमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकालसँग पनि सम्वन्ध छ त?
भदौ २० सम्म पनि खतिवडा राष्ट्रिय सभा सदस्य नभए उनी मन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त हुन्छन्। तर सेयर बजार बढ्नुमा खतिवडाको कार्यकालसँग कुनै सम्वन्ध नरहेको लगानीकर्ताको दावी छ।
‘बिल्कुलै अर्थमन्त्रीको कार्यकालसँग सम्बन्ध छैन, राष्ट्रिय सभामा उहाँको कार्यकाल थपिने, नथपिने नै टुंगो नलागेका बेला बजारमा कसरी असर परेको मान्ने? यसमा अर्थमन्त्रीको नाम जोड्नु गलत हो’ अर्का लगानीकर्ता पिताम्बर खरेलले भने।
सोमबार चम्कियो बीमा, पुनर्बीमामा आकर्षण
सोमबार जीवन र निर्जीवन दुबै बीमा समूह उच्च दरले बढेका छन्। जीवन बीमा २६० र निर्जीवन बीमा २३३ अंकले बढे।
यस दिन होटल बाहेकका सबै समूह बढेका छन्। सो समूह १ अंकमुनि रातो रह्यो। बैंकिङ ४, ब्यापार १८, विकास बैंक १, जलविद्युत ३३, फाइनान्स १, उत्पादन ८८, अन्य ३७, माइक्रोफाइनान्स ८ अंकले बढेका छन्।
केही दिनदेखि नै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा अत्याधिक आकर्षण बढेको छ। सोमबार सो कम्पनीकै सबैभन्दा बढी २८ करोडभन्दा बढी रकमको सेयर कारोबार भयो। सो कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत मूल्य कमाए।
उन्नती सहकार्य लघुवित्त, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिनर्जी पावर, अरुण काबेली, रैराङ हाइड्रो, पाँचथर पावर तथा युनियन हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले ९ प्रतिशत बढी नाफा कमाए।
हिमाल दोलखाका लगानीकर्ताले भने ७ प्रतिशत बढी मूल्य गुमाएका छन्।
प्रकाशित मिति १५ भाद्र २०७७, सोमबार १६:३४